MILAVONJY PHILOBERT : Voaroaka tao amin’ny Foko Antandroy fa “Nanota fady”
“Nanota fady”, hoy ny loharanom-baovao. Nikomy ny mponina tany Androy ny faran’ny herinandro lasa teo noho ny fihetsika tsy voahevitra izay voalaza fa nataon’ny depiote Milavonjy Philobert, depiote niara-dia tamin’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara (Hvm). 9 octobre 2018
Raha ny vaovao voaray dia nikasa ny hanao soron-dambo tao amina tanàna kely iray ao anatin’ny Faritra Androy ity olom-boafidy. Toerana izay voararan’ny fady ifampifehezan’ny mpiray tanàna hiandraiketan’ireo olobe sy ampanjaka fa fady ary tsy azo itondrana kisoa. Teo amin’io faritra io mihitsy anefa no nikasa hanao soron-dambo izany ny depiote Milavonjy Philobert izay tena nampirehitra ny hatezeram-bahoaka.
Vokany, niafara tamin’ny hetsi-bahoaka tao an-tanàna ity ota fady nataona depiote ity. Raikitra ny filanjana sora-baventy manerana ny tanàna izay manameloka io fihetsika nataon’ny solombavambahoaka Milavonjy io. Mitaky tsy misy fepetra ny hanalana an’ity farany tsy ho ao anatin’ny fianakaviamben’ny foko Antandroy intsony ny mponina any an-toerana. Araka ny loharanom-baovao voaray hatrany dia ireo ampanjaka ao an-tanàna mihitsy no miray feo sy manameloka ity fihetsika nataon’ny depiote Milavonjy Philobert ity.
Telo mianadahy efa nahazo 160 tapitrisa Ariary nadoboka am-ponja vonjimaika FISOLOKIANA (123) 18 juin 2019 Niakatra Fitsarana ireo zandary telo voarohirohy KOLIKOLY TENY AMIN’NY LALAM-PIRENENA RN4 (106) 17 juin 2019 Nahazo ny maro an’isa ny kandidà avy amin’ny IRD VOKATRA VONJIMAIKA FENO NAVOAKAN’NY CENI (87) 18 juin 2019 Depiote teo aloha miisa 50 no ho tafaverina raha tsy miova tamin’ny voka-pifidianana ANTEMIERAM-PIRENENA (86) 18 juin 2019 Tratra ny mpamily kamiao nitondra entana halatra milanja 8 taonina ASAN-JIOLAHY TOAMASINA (85) 18 juin 2019 Natontongan’ny IRD ny TIM tao Vakinankaratra FIFIDIANANA DEPIOTE ANTSIRABE II (82) 18 juin 2019